ढलको पानी परीक्षणबाट कोरोना फैलिएको पत्ता लगाउन सकिने नेपाली वैज्ञानिकको दावी – WASHKhabar
ढलको पानी परीक्षणबाट कोरोना फैलिएको पत्ता लगाउन सकिने नेपाली वैज्ञानिकको दावी
१३ असार २०७७, शनिबार १२:३४ 377 पटक हेरिएको
काठमाडौ : ढलको पानीमा कोभिड–१९ को विषाणु सार्स (कोभ–२) फेला परेको छ । जापानको यामानासी विश्वविद्यालयमा गरिएको अनुसन्धानमा कोभिड़–१९ रोगको विषाणु सार्स (कोभ–२) फेला परेको दावी गरिएको छ ।
यामानासी विश्वविद्यालयमा सो अध्ययनमा संलग्न डा. ओसन थकालीका अनुसार, कोभिड–१९ सङ्क्रमितको (चाहे लक्षण देखाउने होस् या नदेखाउने) दिसा र पिसाबमा विषाणु सार्स (कोभ–२) पाइएको छ । सो अध्ययन अनुसन्धानमा प्रा. डा. ऐजी हारामोतो, डा. विकास मल्ल, डा. ओशन थकाली र होक्काइडो विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक डा। मासाकी किताजिमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । सो अनुसन्धान हालै विश्व प्रख्यात जर्नल साइन्स अफ द टोटल इनभाइरन्मेन्टमा प्रकाशित भएको डा. ओसन थकालीले जानकारी दिनुभयो ।
कोभिड–१९ का सङ्क्रमितमा प्रायः लक्षण नदेखाउने भएकाले अस्पताल नजाने र त्यस्ता ठाउँमा महामारी नभएको अनुमान लगाउने गरिएको छ । त्यसैले ढलको पानीमा सार्स (कोभ–२) को आरएनए परीक्षण गरी कुन कुन स्थानमा कोभिड–१९ फैलिएको छ भनेर पत्ता लगाउन सकिने डा. थकालीले जानकारी दिनुभयो । क्लिनिकल स्वाबसँंगै ढलको पानीमा अनुसन्धान गरेर यस महामारी रोक्न थप मद्दत पुग्ने सुझाव डा. थकालीको छ । कोभिड–१९ मात्र नभई अन्य रोगको यसै विधिबाट छानबिन गर्न सकिने विज्ञहरूको धारणा छ ।
यस अघि गत मे महिनामा फ्रान्सेली वैज्ञानिकहरूले पेरिसनजिकैको एक बिरामीको नमूनामा डिसेम्बर २७ मै निमोनिया झैँ लक्षण देखिने सङ्क्रमण फेला परेको दाबी गरेका थिए । स्पेनमा एक अध्ययनले बार्सिलोनामा मध्य जनवरीमा नै फोहोर पानीमा भाइरसको पत्ता लागेको दाबी गरेको छ । यस्तो सङ्क्रमण स्पेनमा पहिलो सङ्क्रमितको पुष्टि भएको ४० दिनअघि नै पाइएको थियो ।
अध्ययनमा आईएसएसले पानी प्रशोधन गर्ने उद्योगबाट ४० वटा ढलको पानीको नमूना सङ्कलन गरेको थियो । उत्तरी इटालीमा अक्टोबर र फेब्रुअरी महिनामा नमूना सङ्कलन गरियो ।अक्टोबर र नोभेम्बर महिनामा गरिएको परीक्षणले निगेटिभ परिणाम देखाएको थियो । तत्काल भाइरसको सङ्क्रमण देखिएन । जनवरी महिनामा बोलोग्नाको फोहोर पानी परीक्षण गर्दा भाइरस पत्ता लागेको आईएसएसको पानीको परिमाण विज्ञ जिसेप्पिन ला रोसाले बताउनुभयो । ला रोसाले भाइरसको सङ्क्रमण फैलिने क्रमलाई उक्त अनुसन्धानले बल पुर्याएको तर्क गर्नुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार पानी परीक्षण सम्बन्धी हालसम्म गरिएको अनुसन्धानले सङक्रमणको मुख्य कडी पहिलो सङ्क्रमितसँग जोडिई प्रकोपको रुप लिएकोसँग जोडिएको देखिन्न । इटालीको लोम्बार्डी क्षेत्रको कोडोग्नो शहरमा पहिलो पटक एक स्थानीयमा भाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि भएको थियो । शहर तत्कालै बन्द गरियो र फेब्रुअरी २१ मा ‘रेड जोन’ घोषित गरियो । यो खबर गोरखापत्र अनलाइनबाट साभार गरिएको हो ।